Miaramila fiadiana - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5 | DPS, mpiady, lalao, legion | WoW Guides | WoW Guides
Miaramila fiadiana - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Sofia Vigo | | DPS, mpiady, Game Guide, Legiona
Salama daholo, manao ahoana daholo ianareo amin'ny tontolon'ny Azeroth? Ho ahy, eto indray aho hitondra anao mpitari-dalana hafa momba ilay mpiady amin'ny patch 7.3.5. Tamin'ity indray mitoraka ity momba ny fitaovam-piadiana mpiady. Manantena aho fa tianao izany ary manampy anao hahafantatra bebe kokoa momba azy io.
Tompony mafy ady amin'ny fitaovam-piadiana am-pelatanana, mampiasa finday sy fanafihana tsy an-kijanona izy ireo handravana ireo mpanohitra azy. Miandry ny fotoana mety indrindra hamelezana ny fahavalony amin'ny herin'ny tafika ny mpiady fitaovam-piadiana. Ny mpiady no mpiady mahery fo amin'ny ady, ary ny fahasahiany amin'ny ady dia miteraka herim-po amin'ireo mpiray dina ary mampihorohoro amin'ny fahavalo. Manam-pahaizana amin'ny fikirakirana ny karazana fitaovam-piadiana am-piadiana sy ny fananana tanjaka ara-batana sy fahaizana mahatalanjona, ireo mpiady dia vonona tanteraka hiady amin'ny laharana voalohany ary hiasa ho komandy amin'ny ady.
Amin'izao fotoana izao raha ny momba ny specialities hafa, ho an'ny fitaovam-piadiana mpiady, manana ny napetraka isika Giant's Battlegear. Rehefa mampita singa roa amin'ity seta ity dia hahazo bonus isika ary rehefa manome ny 4 amin'izy ireo dia hanampy bonus hafa izahay. Satria misy singa enina ny ekipa dia hanana safidy isika hisafidy ny iray mety indrindra aminay, hahazo ny bonus amin'ireo sanganasa efatra ary hahafahana manatsara ny lalao ataonay amin'ny alàlan'ny fanararaotana ireo fanatsarana izay mampita ny tenanay amin'ireo efatra manome antsika ny sombin-tsolika.
Pauldrons an'ny Giant
Bonus manome antsika ity seta ity:
Tapa-2: Rehefa mampiasa Colossus Smash ianao, dia mitombo 7% ho an'ny 8 sec ny fahasimbana ataonao.
Tapa-4: Mortal Strike dia mampitombo ny fahavoazana sy ny voka-dratsin'ny fitsangatsanganana an-tsambo manaraka anao amin'ny 12%. Mipetaka hatramin'ny in-3 izy io.
Fanovana amin'ny patch 7.3.5
Tsy nisy fiovana ny fahaizan'ny mpiady fitaovam-piadiana.
Eto dia manana ny fananganana talenta ampiasaiko ianao amin'ny fotoana ilalaovako ny fitaovam-piadiako. Na izany na tsy izany, ary araka ny nolazaiko anao teo aloha, amin'izao fotoana izao dia manamora ny fahafahantsika manova talenta arakaraka ny sefo hatrehintsika isika, koa raha tsy tianao ny olona iray dia afaka manandrana hafa ianao mieritreritra fa afaka mandeha tsara indrindra ianao.
Tier 15: tsy hatahotahotra toa azy
Tier 30: Enta-mavesatra indroa
Tier 45: ratra
Tier 60: Dingana avo
Tier 75: Fifaliana amin'ny ady
Tier 90: Midira hamono
Tier 100: Kapoka ara-potoana
tsy hatahotahotra toa azy: Ny fahaizanao 10% latsaka Rage.
manafotra: Mandresy ny fahavalo noho ny fahasimbana 375%. fahasimbana ara-batana. Tsy azo sakanana, hialana, na halazo izany, ary manana 60% nitombo ny fahafahany mitokona. Ny fahaizanao hira hafa dia manana fotoana mety hiteraka Overwhelm.
Kapoka fikasana: Fitokonana sy famonoana mety maty nahatratra lasibatra 2 teo akaiky teo.
Nifidy aho tsy hatahotahotra toa azy amin'ny famonjena ny hatezerako ary koa ny fananako talenta tsara indrindra amin'ny tanjona tokana. Amin'ny fihaonana sasany Kapoka fikasana mety ho safidy tsara koa io.
Onja manafintohina: Mandefa onjan'ny hery ao anaty kônal eo anoloana, manimba (47.5% ny herin'ny fanafihana). manimba sy mampitsahatra ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra mandritra ny 3 seg. Ahenao 20 segondra ny cooldown raha toa ka kendrena 3 farafaharatsiny.
Fivoahan'ny tafiotra: Atsipazo amin'ny fahavalo ny fitaovam-piadianao, mifampiraharaha (100% amin'ny herin'ny fanafihana) p. fahasimbana ara-batana ary mampihetsi-po azy mandritra ny 4 seg.
Enta-mavesatra indroa: Mampitombo ny isa ambony indrindra amin'ny fiampangana sarany 1 ary mampihena ny cooldown azy ho 3 segaondra.
Tamin'ity indray mitoraka ity no nofidiko Enta-mavesatra indroa, ho an'ny fivezivezena lehibe atolotray ahy mandritra ny fivoriana.
ratra: Ny Slam, tafio-drivotra ary ny fanatanterahana izao dia miteraka rà mandriaka ny kendrena, miteraka fahasimbana 20% fanampiny mihoatra ny 6 seg. Miaraka amin'ny fampiasana maro, simba ny fahasimbana.
Entona: Manimba ny tanjona amin'ny fahasimbana 150%. fahasimbana ara-batana eo noho eo ary (1000% ny herin'ny fanafihana). fanampin-dra simba mihoatra ny 8 seg.
Avatar: Miova ho Colossus mandritra ny 20 seg, mahatonga anao hiatrika fahasimbana 20% bebe kokoa ary hanala ireo vokatra Rooting sy Snapping rehetra.
Nifidy aho ratra noho ny habetsaky ny fahasimbana bonus dia miatrika fahaiza-manao isan-karazany aho. Izy io koa dia mitambatra tsara miaraka Fifaliana amin'ny ady. Izy io ihany koa no talenta tsara indrindra raha manana ireo sombiny 4 an'ny Giant's Battlegear satria hanararaotra ny bonus omeny antsika isika.
Rivotra faharoa: Mamerina amin'ny laoniny ny fahasalamana 6% isaky ny 1 seg rehefa tsy nitondra fahavoazana ianao nandritra ny 5 seg.
Dingana avo: Mampihena 15 taona ny cooldown an'ny Heroic Leap, ary ny Heroic Leap dia mampitombo ny hafainganam-pandehanao ankehitriny 70% ho an'ny 3 seg.
Fihetsika miaro tena: Firenena mpiady fiarovana izay mampihena ny fahavoazana rehetra azonao amin'ny 20%, ary ny fahavoazana rehetra azonao 10%. Maharitra mandra-panafoanana.
Eto aho dia nisafidy Dingana avo satria manome fivezivezena be ho ahy izany mandritra ireo fivoriana.
Fifaliana amin'ny ady: Ny tadion-drivotra dia miteraka fahasimbana 80% bebe kokoa amin'ny tanjonao voalohany.
Combo mahafaty: Mortal Strike izao dia manana fiampangana 2 be indrindra.
Titanic might: Ampitomboina 8 segondra ny faharetan'ny Colossal Smash ary ahena 8 segondra ny cooldown-ny.
Amin'ity tranga ity dia nifidy aho Fifaliana amin'ny ady ho an'ny fahasimbana mitombo ary miasa tsara ihany koa amin'ny Giant's Battlegear rehefa manana ny fitaovana 4 misy fitaovana. Amin'ny fihaonana sasany Titanic might mety ho safidy tsara koa io.
Milamina tsara: Battlecry dia mampihena ny vidin'ny fahatezerana amin'ny fahaizanao hatramin'ny 75% mihoatra ny faharetany.
Midira hamono: Mortal Strike miverina 40. ny Rage raha ampiasaina amin'ny tanjona tsy dia misy fahasalamana 20%.
Fahatezerana mitarika: Mampifantoka ny hatezeranao amin'ny Mortal Strike manarakao, mampitombo ny fahavoazana entiny 30%. Miorina hatramin'ny in-3 izy. Tsy voakasiky ny cooldown manerantany izany.
Nifidy aho Midira hamono noho ny fitomboan'ny fahatezerana dia omeny ahy ary koa ireo talenta roa hafa dia tsy naharesy lahatra ahy loatra.
Fanaraha-maso ny hatezerana:
Kapoka ara-potoana: Ny fahaizanao melee dia mety hahatratra 60%, mifototra amin'ny fahasalamana kendrena kendrena, hiteraka fanafihana fanampiny, hiatrehana hery 160%. Fahasimbana ara-batana ary miteraka 5. ny fahatezerana.
voka: Mandefa fitaovam-piadiana mihodina eo amin'ny toerana kendrena, miatrika [7 * (337.5% amin'ny herin'ny fanafihana)] p. fahasimban'ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra hatramin'ny 7 seg.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nisafidy aho Kapoka ara-potoana Satria io no tena ahazoako aina indrindra ary manana vintana tsara ihany koa izy io hampiasana azy amin'ny alàlan'ny fampiasantsika izay fahaizantsika ary miaraka amin'izany dia afaka manimba be dia be isika, ankoatry ny miteraka fahatezerana mihoa-pampana. Amin'ny fihaonana sasany ny safidy voka i viable koa ary talenta tsara mifanohitra amin'ny lasibatra isan-karazany.
Fifehezana> Haingana = Fahavoafotoana = Fitokonana mitsikera
Enchantments sy vatosoa
Enchant neck - Mariky ny satyrita miafina: Mitafy rojo maharitra hiantso satyrera indraindray, izay handefa Nightmare Bolt amin'ny fahavalonao, hiatrika fahasimbana.
Peratra Enchant - Fatoran'ny fifehezana- Enchant maharitra ny peratra hampitomboana ny fifehezana 200.
Enchant Cloak - Famatorana ny tanjaka: Famosaviana akanjo fotsy maharitra mba hampitomboana hery amin'ny 200p.
Master Argulite: +200 Fifehezana.
Flasks, potion, sakafo ary rune fampitomboana.
Tavoahangin'ny tafika tsy manam-petra: Mampitombo 400 ny tanjaka. mandritra ny adiny 1. Manisa toy ny mpiaro sy elixir an'ady. Ny vokany dia mitohy any ankoatry ny fahafatesana. (3 Sec Cooldown)
Ny ady tamin'ny ady taloha: Miantso mpiady matoatoa nalatsaka hanampy anao amin'ny ady. Ny fahaizanao sy ny fanafihana an-tsokosoko dia mety hiteraka, amin'ny 146641. Ny fahasimbana. (Cooldown 1 Min)
Potion ny hery maharitra: Misotroa hampiakarana ny statistika rehetra amin'ny taona 2500. mandritra ny 1 min. (Cooldown 1 Min)
Loharanon'ny sakafo matsiro: Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 375 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. mari-pahaizana master mandritra ny XNUMX ora.
Fetin'i Suramar: Manomàna andro firavoravoana Suramar mamelona olona 35 amin'ny tarika na fety misy anao. Mamerina amin'ny laoniny 200000 p. fahasalamana sy 400000 20 p. mana mihoatra ny 10 seg. Tsy maintsy mipetraka foana ianao rehefa misakafo. Raha mandany farafahakeliny 300 segondra fihinanana ianao dia ho voky tena ary hahazo 1. ny statistika mandritra ny XNUMX ora.
Rune Augment Rune: Mampitombo ny fahakingan-tsaina, ny saina ary ny tanjaka amin'ny 325. mandritra ny adiny 1. Rune of augmentation. (Cooldown 1 Min). Raha manana Tafiky ny mazava ao amin'ny Avo ianao dia afaka mividy an'ity rune ity.
Rune Augment Rune: Mampitombo ny fahakingan-tsaina, ny saina ary ny tanjaka amin'ny 325. mandritra ny adiny 1. Rune of augmentation.
Groove Anaran'ny ampahany Boss izay mamela
Casco Giant's Helm Aggramar
Casco Delirium Trim Choker
Vatoky ny lelafo tsy misy
sorony Pauldrons an'ny Giant Fivoriambe Shivarra
indray Akanjo goavambe Antoran'ny baiko avo
tratra Giant's Breastplate Eonar
saribakoly Vambraces amin'ny fiantohana fiainana Eonar
fonon-tanana Tanana mavesatr'i Archavon
andilany Fehikibo nataon'i Papa Grond Aggramar
tongotra Legplates amin'ny sorona kosmika
Greaves of Mercuric Allegiance
Argus the Annihilator
Pies Sabatons amin'ny filankevitra ady eredar Antoran'ny baiko avo
Tady 1 Heart Heart of Ayala
Hoop an'ny olo-masina mpiaro ny fiainana
Tady 2 Tombo-kasen'ilay Pantheon voaloto
Fanahin'ny tompon'ny ady
Trinket 1 Areti-mandringana misy elatra Varimatra
Trinket 2 Fahitana an'i Aman'thul malaza
Relika vy Fesin'ny legiona tsy manam-petra Antoran'ny baiko avo
Rakitsa-dra Nathrezim incisor Varimatra
Shadow Relic Zava-dehibe tsy azo vonoina Eonar
* Iray amin'ireo trinketra ampiasako matetika amin'ny fihaonan'ny Antorus, ny seza fiandrianana mirehitra Fahasahian'i Khaz'goroth, fa azontsika atao amin'ny Argus the Annihilator izany.
Usar Mamaky kolosaly Isaky ny afaka manao izany isika.Raha tsy miasa io dia hampiasaintsika mpila ady.
Usar Run rehefa misy izany ary mihoatra ny 40 ny hatezeranay.
Usar maty Punch rehefa ananantsika izany.
Usar Hiakanakan'i Battle isaky ny afaka izahay.
Usar tafio-drivotra amin'ny mitresaka.
Ahoana no nifidianantsika ny talenta Fifaliana amin'ny ady, rehefa manana hatezerana tafahoatra isika dia afaka mampiasa tafio-drivotra.
Hampiasa izahay Bladestorm rehefa be fahavalo.
Tantarao/Metera fanimbana Skada - Addon handrefesana dps, agro niteraka, fahafatesana, fanasitranana, fahasimbana azo, sns.
Mods Boss mahafaty - Addon izay mampitandrina antsika amin'ny fahaizan'ny mpitarika andian-jiolahy
Weakauras - Mampiseho amintsika vaovao momba ny ady io sary io.
fambara - Aggro metatra.
GTFO - Mampitandrina antsika izany raha mahazo fahasimbana na manao fahadisoana isika.
Parrot o Lahatsoratra ady nataon'i Mik - Asehon'izy ireo amintsika ny lahatsoratra miady mitsingevana raha mbola miady izahay (fanasitranana tonga, fahasimban'ny ozanao sns.).
ElvUI - Addon izay manova ny interface manontolo.
Hatreto dia ity torolàlana kely ity, izay antenaiko fa hanampy anao hanomboka ny bemidina amin'ny fitaovam-piadiana mpiadinao na mpiadinao. Enga anie ianao hanao tsara sy hiala voly. Mandrapihaona any Azeroth!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Miaramila fiadiana - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Shule Elemental - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Ny streamer ianxplosion dia tonga amin'ny haavo 60 amin'ny famonoana lambo dia fotsiny